UMnyango nezinhlelo zokuqinisa isandla kwabangondli - Bayede News
Oqapha iminwe yakhe uyakuwulonda umsebenzi
UMnyango Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo usuqhamuke nohlelo olusha lokuqinisekisa ukuthi izinhlelo zokukhokhwa kwesondlo ziyenzeka.
UNks uJosephina Pieter woMnyango uthe lolu hlelo lwehluke kakhulu kulolu abalusebenzisayo ngoba bathola abazali abehluleka ukukhokha imali yesondlo bese beyiswa enkantolo ukuze kuqhubeke isicelo sesondlo.
“Okwamanje uma uphethe isicelo sesondlo asikwazi ukuthi siqhubeke uma umzali engazanga enkantolo. Okwesibili, sifuna ukuthola ukuthi bahola malini nokuthi bayitholaphi imali,” kusho uNks uPieter.
Uthe kwezinye izikhathi bathola umzali onebhizinisi lamatekisi kepha akafisi ukuthi inkantolo ithole ukuthi uyakha kuphi imali, qede enkantolo athi akanayo. Lolu hlelo luzobaphoqa ukuthi baye enkantolo njengoba sesikwazi ukuthola umuntu uhlala kuphi, nokuthi usebenza kuphi.
“Lolu hlelo luzoveza ukuthi umuntu unenkampani futhi unamasheya kuphi. Nokuthi unayiphi impahla khona sizokwazi ukuthi kutholwe leyo mali bese kukhokhwa imali yesondlo, njengoba umthetho uthi kumele kondliwe abantwana kuqala ngaphambi kokuthi kwenziwe ezinye izinto,” usho kanje.
Eveza ukuthi lolu hlelo lwamanje luvuza ngakuphi okwenza ukuthi okumele engabe bayondla bagcine bekwazi ukubaleka uthe: “Abantu bayatholakala bese bethi abasebenzi. Abanye abatholakali nhlobo. Umthetho wokuqala bewuthi sithole imniningwane ngomakhalekhukwini. Inkinga ngezingcingo ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bathenge amasim card emgwaqweni okugcina kuyizingcingo abangazibhalisanga, okuyinkinga enkulu. Abanye bathi abasebenzi. Uma umuntu engasebenzi awukwazi ukuthi uqhubeke nesicelo sesondlo.” kuchaza yena.
Eseveza ukuthi bazoyivikela kanjani imniningwane yabantu ukuthi ingaweli ezandleni ezingafanele uthe: “Lolu lwazi alzosetshenziswa noma ubani eMnyangweni wethu kepha kuzotholakala abantu, abazoqeqeshwa, bese benikezwa izinombolo umuntu ngamunye ezomnika imvume yokuthi akwazi ukufinyelela kulolo lwazi. Njalo ngesonto sizobuyekeza ukuze sizobona ukuthi lokhu bakusebenzise kuphi.”
Isikhathi esiningi kuvame ukuthiwa ngobaba okufanele bondle izingane. Esephendula kulokhu uthe: “Umthetho uthi abazali bonke kumele bakhiphe isondlo sabantwana. Uma ubaba ehlala nabantwana umama engafuni ukondla naye uzolandelwa. Uma efika umama efaka isicelo naye sizothola ukuthi imali uyenza kanjani khona kuzohlukaniswa ngokulinganayo izindleko zomntwana.”
Zivamile izinkulumo zokuthi umthetho awuqinile kulabo abasuke kuthiwe abondle izingane, bayeke bese bephinda bebuyela enkantolo.
Ephendula ngokuqinisa isandla uthe: “Ngowezi-2015 kwenziwe uMthetho Ochitshiyelwe Wesondlo, kepha uqale ukusebenza ngowezi-2018 uMnyango wahlala phansi wathi kumele kuqiniswe isandla ngoba kukhona abadelela uMthetho. Sabuka ukuthi kuzofanele kuhlonzwe abantu abangondli. Ngakho uma ungondli wena kuzothiwa uwumuntu ongakhokhi, igama lakho lizohlala kwabezikweletu iCredit Bereau. Okwesibili kunoMyalelo Wenkantolo othi ongondli usengaboshwa imnyaka emithathu.”